အရောငျရငျ့မှတျတမျး ဇူလိုငျ ၂၀၁၉ – Bold news July 2019 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အရောငျရငျ့မှတျတမျး ဇူလိုငျ ၂၀၁၉ – Bold news July 2019
အရောငျရငျ့မှတျတမျး ဇူလိုငျ ၂၀၁၉ – Bold news July 2019
Los Angeles မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အောင်ရင်၊ အိမ့်ချစ်၊ ဂျူဝယ်၊ ဇွဲပြည့်တို့ စင်တင်တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ။
အဖေများနေ့၊ မြန်မာမွတ်စလင်များရဲ့ အစ်ထွက်Prtluck ပွဲ သတင်းများ။
Texas ပြည်နယ်၊ Amarillo မြို့က ဇေယျသုခဓမ္မရိပ်သာ သာသနာ့ဝိပုလကာရီသိမ်တော်ကြီး ၊ ဝေနေယျသုခဓမ္မဗိမာန်ကျောင်းလွှတ်ပူဇာသဘင်။
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဦးရာဇတ်၏သားငယ် ဦးလှကြည်၏ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်စကားများ။
တေးသံရှင် Jewelနဲ့ အမေးအဖြေ။
မောင်စွမ်းရည်၏ ပန်းချီဆရာ၊ ကာယဆရာ၊ လက်သမားဆရာ။
မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘွဲ့) ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောဂါများ။
မောင်မိုးညိုရဲ့ DIY နိုင်ကြသော မြန်မာများအဖြစ် ဆောင်းပါး။
ဇူလိုင်လအလှပန်းအဖြစ် Kathy Chen
လစဉ်ဖော်ပြ နေကျ ဆရာမျိုးကျော်မြင့်၏ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဗေဒင်သုတ၊ အစားအသောက်နှင့် သုတ/ရသ စုံလင်စွာ၊ ဓာတ်ပုံဝေ ဝေ ဆာဆာဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာဆိုင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ချခ်ျများမှာ အခမဲ့ ရယူပါ။
“ဖေ့စ်ဘုတ်ရုံးရဲ့ စာ‌ပေးစာယူဌာနမှာ.. အဆိပ်ပါစာအိပ်တွေ့..”
ဒီနေ့နေ့လည်မှာ.. ကယ်လီဖိုးနီးယား‌မြောက်ပိုင်းက.. မန်င်လိုပါ့ခ်မှာရှိတဲ့.. ဖဘရုံး.. စာ‌ပါဆယ်‌တွေလက်ခံတဲ့ဌာနမှာ.. ဆာရင်းအဆိပ်ပါစာအိပ်တွေ့တယ်ဆိုပါတယ်..
(အခုထိတော့.. ) ဘယ်သူမှမထိခိုက်။ ထိခိုက်ကြောင်သတင်းမပို့ထားသေးပါဘူးတဲ့..။
အဲဒီ ဆာရင်းအဆိပ်ကလူလုပ်.. စစ်သုံးအဆိပ်ပါ….
ဖွက့်လိုက်ရင်ထွက်တဲ့အငွေ့နဲ့ ရူမိ/ထိမိတဲ့..လူ အကြောဆွဲ/သေနိုင်ပါတယ်..။
ဂျပန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်‌လောက်(၁၉၉၅နှစ်)က.. ဥုမ်အမည်ရှိ ဘာသာ‌ရေးဂိုဏ်းရဲ့ ဂိုဏ်းသား‌တွေသုံးသွားပြီး.. တိုကျို‌မြေအောက်ရထား‌တွေပေါမှာ ထိုး‌ဖောက်ခွဲတဲ့အဆိပ်မျိုးပါ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. တကမ္ဘာလုံးကလူတွေ အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့.. အခမဲ့လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဖဘကို.. အား‌ပေးပါတယ်..။
ဘေးရန်ကင်းစွာ.. ကမ္ဘာတာဝန်ထမ်း‌ဆောင်နိုင်ကြပါ‌စေလိုတဲ့ အကြောင်း..
“ကယ်လီဖိုးနီးယန်းများအတွက်..ဒီနေ့ ဇူလိုင်၁ ကစပြီး.. ဂက်စ်(ဓတ်ဆီဈေးတက်)”
၂၀၁၇ က.. “ဆီဈေးတက်ပါ.. ဆီဈေး‌တွေတက်လိုက်ပါ… “လို့ မဲပေးထားသူများတို့ရေ..
သင်တို့မဲပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း.. ဒီနေ့ကစ.. ဆီဈေးတက်ပါပြီ..။( တဂါလံ ၅.၆ဆင့်တက်တာပါ)
အခုလိုတက်တာ‌‌ကြောင့်.. တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာယှဉ်ရင်…. ဂက်‌‌စ်ဈေး.. တဂါလံတိုင်းကို ၁‌ဒေါ်လာပိုပေး‌နေရပြီဖြစ်ပါတယ်..။
ယနေ့ဈေး.. ကယ်လီ =$ ၃.၇၅၅ တဂါလံ
အခြားပြည်နယ်များ =$ ၂.၇၁၇
မူလကလည်း.. ဂက်စ်တွေမီးရှို့ရင်ထွက်လာရမယ့်.. ကာဗွန်ငွေ့တွေနည်း‌အောင်. အခြားပြည်နယ်တွေနဲ့မတူ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ‌ရောင်းဖို့ ဓာတ်ဆီက.. ရှယ်.. သီးသန့်ပရောဆက်.. လုပ်နည်းနဲ့.. ‌‌ရေနံကချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒါ‌ကြောင့်် .. အခြားပြည်နယ်တွေထက်… ဈေးပို..။
အဲဒီ ဓာတ်ဆီဈေးတင်.. ပိုထွက်လာ‌ငွေ.. (၅.၂ ဘီလီယံဒေါ်လာ ) ကိုလမ်း‌/တံတားတွေပြင်ဖို့ရာ ဘက်ဂျက်မှာ သုံးပါမယ်တဲ့..။
အမေရိကပြည်ထောင်စုမွေးဖွားရာ‌နေ့.. အခုလာမယ့်… ၄ရက်ဇူလိုင်မှာ.. ခရီးထွက်မယ့်သူများ.. တက်လာတဲ့ဆီဈေး‌ကြောင့်အကုန်အကျပိုများသွားမှာပါတဲ့..။
ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုတာက.. အပြာပြည်နယ်..။ .. လစ်ဘရယ်စတိတ်..။
မြန်မာနိုင်ငံမယ်.. လျှပ်စစ်/မီတာခတွေ တက်တာကို ‌ပြောမိတာ.. သတိရ..။
ဝဋ်များလည်သလားမသိ..။ မစ်စတာဝဋ်ရေ..။ ခွင့်လွှတ်ပါ့…။